प्रभाबशाली उम्मेदवार कमरेड तेज बहादुर ओली को हुन् ? « Postpati – News For All
प्रभाबशाली उम्मेदवार कमरेड तेज बहादुर ओली को हुन् ?
कर्मसहि घर्ती मगर
साविक रुकुमका स्थानीय चुनाबमा ९ वटै स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गर्ने योजनाकार तथा कमाण्डर हुन् तेजबहादुर वली उर्फ प्रतीक ! २०३१ साल साउन ३१ गतेका दिन भूमे गाउँ पालिका वडा नं. ६ (साबिक महत – १) मा वुबा कृपासिँ ओली र आमा गाैतारा ओलीको कोखमा जन्मेका कमरेड तेजबहादुर ओली , अहिले रुकुम पूर्ब निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रदेश सभामा माओबादी केन्द्रको तर्फबाट आगामी मंसिर १० गते हुने निर्वाचनका लागि प्रत्येक्ष उम्मेदवार हुन् ।
बाम गठबन्धन अनुसार यो जिल्लामा माओबादी केन्द्रलाई नेकपा ऐमालेको साथ समर्थन रहनेछ । उनको पर्तिस्पर्धामा नयाँ शक्तिका उम्मेदवार राखेमान घर्ती र नेपाली काँग्रेसका ध्रुब पुन हुने छन् । विश्लेषकहरुका अनुसार माओबादी उम्मेदवार तेज बहादुर ओलीको भारी मतले विजयी हुने निर्विवाद छ । २०४७ सालमा अ.ने.रा.स्व.बि.यु. को सदस्यता लिएका उनले रुक्मिणी मा.बि. रुकुमकोटमा इकाई सदस्य भएर काम शुरु गरेका थिए । २०४८ सालमा तत्कालीन मशालको पार्टी सदस्यता लिएका थिए । बिद्यार्थी राजनीतिमा निरन्तर लागेका तेज बहादुर ओली २०४९ सालमा जिल्ला सदस्यमा निर्वाचित भए ।
बिद्यार्थीहरु माँझ आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएका उनी छोटो अवधिमै २०५१ सालमा जिल्ला अध्यक्ष पदमा छानिए । २०५२ साल फाल्गुण १ गते शुरु भएको महान जनयुध्दमा सुरुक्षा दल कमाण्डर भएर आफ्नो भूमिगत जीवनको शुरुवात गरेका उनी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को एरिया पार्टी संयोजकको जिम्मा पनि लिएर खटिए ।
२०५२ सालमै नेकपा (माओवादी) को जिल्ला कमिटी सदस्यमा रहन सफल उनी त्यहि साल अ.ने.रा.स्व.बि.यु (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । यतिबेला सम्म उनको दक्षता पार्टी र बिद्यार्थी राजनीतिमा चुलिएको थियो । देशको यो जीर्ण अबस्थालाई कायापलट गर्न दरिलो संकल्पका साथ मृत्युु र मुक्तिको कसम खाएर महान जनयुद्धमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका कमरेड तेज बहादुर ओली २०५४ सालमा दाङ, प्युठान र सल्यानको संयुक्त जिल्ला सचिवालय सदस्य भएर त्यतै कार्यक्षेत्र बनाई आफ्नो गहन जिम्मेवारी वहन गर्दै रहे ।
पार्टी र जनताको बीचमा छिटो घुलमिल हुने खुबि भएका उनी २०५६-२०५८ सम्म जुम्ला, कालीकोट र मुगु जिल्लाको सेक्रेटरी भएर कार्य निर्वाह गरे । नेपाली जनयुद्धले गुणात्मक फड्को मार्ने क्रममा २०५८ साल देखि बटालीयन कमान्डर भएको लगत्तै २०५९ सालमा ब्रिगेड कमिसार भएर काम गरे । २०६१ सालमै जनमुक्ति सेना नेपालका डिभिजन कमान्डर भएर ४ बर्ष क्यान्टोनमेन्टमा बसे । त्यहि साल तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को केन्द्रीय सदस्य भए । यसरी उनी १० बर्ष सम्म भेरी-कर्णाली क्षेत्रमा कार्यरत भएर पनि बसे ।
जनयुद्धको थालनीकालमा सुरक्षा कमान्डर भएर होमिएका कमरेड ओली पूर्बी रुकुम, शरुमा थबाङ्ग फाैजी कार्वाहीमा राइफल कब्जा गर्न सफल भएका थिए । सल्यान जिम्पे टावर कब्जा, थुप्रै एम्बुसमा सहभागी भएर कार्य सफल पारेका उनी जुम्ला रारा ली, पाण्डुसेन, नाैमुले दैलेख, दाङ आक्रमण, जुम्ला, अर्घाखाँची, म्याग्दी, खारा, पाल्पा, रम्बापुर, नवलपरासी, पिली लगायतका कार्वाहीमा नेतृत्व गरेका थिए ।
२०६५ सालमा भएको सेना समायोजनमा बिशेष समिति सचिवालय सदस्य भएर आफ्नो क्षमताको प्रतिपादन गरे । नेपाली राजनीतिको आरोह अवरोहमा जीवनलाई साँध बनाएका कमरेड तेज बहादुर ओली पार्टी पंक्तिमा पनि आफ्नो बेग्लै छवि बनाउन सफल भएका छन् । वर्तमान समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) काे केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा रुकुम पूर्बको इन्चार्जको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका उनी अहिले प्रदेश सभामा प्रत्येक्षमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट सांसद उम्मेदवार हुन् ।
बाम गठबन्धनले एमालेको दरिलो साथ समर्थन पाएका उनको विजय सुनिश्चित छ । पारीवारिक हिसाबले भूपू सभासद जुन कुमारी रोका उनकी जीवन संगीनी हुन् । चुनाैती ओली र संभावना ओली गरि दुई छोरीका पिता कमरेड तेज बहादुर ओली रुकुम पूर्बका अत्यन्त प्रभावशाली नेता मानिन्छन् । गत स्थानीय तहको चुनाबमा तत्कालीन रुकुमका ९ वटै वडामा बिजय गर्न उनको अहम् भूमिका रहेको थियो । उनको कुशल कमाण्डमा नै उक्त बिजयको सुनिचितता भएको बिज्ञहरु बताउँछन् । उनै कमरेड ओली अहिले रुकुम पूर्ब क्षेत्र नं १ बाट प्रदेश सभामा प्रत्येक्ष उम्मेदवारमा उठेका छन् ।
भर्खरै बिधिवत दंगमा टुक्रिएको रुकुम पूर्बलाई उच्च हिमाली क्षेत्रकै नमूना योग्य जिल्लाको रुपमा विकास गर्न र नमिलेका पालिका र वडाहरुलाई संविधान अनुसार न्यायोचित रुपमा मिलाउन विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । साढे दुई दशक देखि नेपाली कम्युनिस्ट राजनीतिमा असल जोदाहाको रुपमा लागि परेका कमरेड ओली आफ्नो बिजयी पश्चात देश र जनताको प्रधान समस्यामा केन्द्रीत भएर काम कार्य गर्ने बाचा गरेको बताउँछन् । अहिले उनी चुनाबी अभियानमा लागेका छन् । जनलहर उनको पक्षमा व्यापक रुपमा लागेको देखेर अधिकाँसले उनको विजयी अब आैपचारिक रुपमा मात्र हुन बाँकी रहेको खुलाशा गरेका छन् ।